नेपालमा सिनेमा – Martin Chautari
- लोकरञ्‍जन पराजुली | 2021-12-01
कार्तिक ११, २०७४-नेपालमा सिनेमा कहिले भित्रियो ठ्याक्कै भन्न कठिन छ । न त नेपालीले कहिलेदेखि सिनेमा हेरे त्यो भन्न सकिन्छ । नेपाली भाषामा बनेका प्रारम्भिक चलचित्रबारे समेत केही विवाद अद्यापि छ, तर त्यसबारे केही लेखिसकिएको छ । नेपालबारे अरूले बनाएका सिनेमा अथवा नेपालमा खिचिएका सुरुआती सिनेमाबारे पनि तोकिएरै केही भन्न सकिन्न । व्यवस्थित अभिलेख तथा यो विषयमा खोजी पस्ने अनुसन्धाताको अभावले हामीलाई यो फाँटबारे खासै थाहा छैन । तथापि, राणाकालको उत्तराद्र्धमा सामान्यजनले सार्वजनिक रूपमा सिनेमाको रसस्वादन गर्न पाएको देखिन्छ । २००६ सालको मंसिरदेखि त नेपालमा पनि सिनेमाहल खोलेर व्यापारिक तवरबाट सिनेमा देखाउन थालेको पाइन्छ । यो आलेख नेपाली (काठमाडौंवासी) को प्रारम्भिक सिनेमा हेराइ, भोगाइ र त्यसबारे भएका केही छलफलमा केन्द्रित छ ।
सिनेमा हिँडेको बाटो
अन्यत्र विश्वमा फिल्म बन्न थालेपछि अंग्रेजहरूले शासन गरेको भारतमा पनि बिस्तारै सिनेमा छिर्‍यो । उन्नाइसौं शताब्दीको अन्ततिर बम्बई र कोलकातामा छिरेको व्यापारिक चलचित्रको प्रदर्शनीक्रम भकाभक अन्य सहरमा समेत फैलियो । भारतीय भाषामा पनि व्यापारिक हिसाबले सिनेमा तयार गरिन लागे, र तिनको सार्वजनिक प्रदर्शन हुन थाल्यो । सीमित सम्भ्रान्तहरूको पकडबाट फुत्किएर सार्वजनिक उपभोग र व्यापारको वस्तु बन्योसिनेमा । भारतका ठूला सहरमा सिनेमा छिरेपछि त्यहाँ बस्ने र यताबाट जाने नेपालीहरूले पनि त्यहाँका सिनेमा घरमा गएर सिनेमा हेरेको हुनुपर्छ । भारतमा सिनेमाको सार्वजनिक प्रदर्शन हुन थालेको केही समयमा नै नेपालका राणाका दरबारमा सिनेमा छिरेको देखिन्छ । तथापि, तिथिमिति ठ्याक्कै तोक्न सकिन्न ।
प्रमोदशमशेर राणाले आफ्नो पुस्त
कमा देवशमशेरको पालामै सामान्य नेपालीले समेत मूक चलचित्र हेर्ने अवसर पाएको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार देवशमशेरले एक हप्तासम्म सामान्यजनलाई टुँडिखेलमा चलचित्र देखाएका थिए । त्यस्तै, पुरुषोत्तमशमशेरले पनि देवशमशेरको पालामा साँझमा ‘बाइस्कोप’ चलचित्र हेर्ने अवसर सामान्यजनले पाएको लेखेका छन् । देवशमशेर सन् १९०१ मा करिब चार महिना प्रधानमन्त्री बनेकाले ढिलोमा उन्नाइसौं शताब्दीको अन्ततिर नेपालमा सिनेमा छिरेको भन्न सकिन्छ ।
देवशमशेरलाई लखेटेर शासनसत्ता हत्याएका चन्द्रशमशेरले त्यसपछि करिब तीन दशक अविच्छिन्न शासन गरे । चन्द्रशमशेरको पालामा राणाहरूकहाँ त भैहाल्यो, केही शक्तिशाली गैरराणा ‘सिविलियन’ कहाँ पनि सिनेमा हेर्ने मेसिन पुगेको हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, मदनमणि दीक्षितको आत्मकथाबाट आचार्य–दीक्षित खलककहाँ सिनेमा हेर्ने औजार भएको बुझिन्छ । सन् १९३५ को नेसनल जिओग्राफिक म्यागेजिनका अनुसार जुद्धशमशेरले सिनेमालगायत पश्चिमा सिर्जनालाई नेपालको सरहदभित्र छिर्नमा नियन्त्रण गरेको उल्लेख छ । पश्चिमाहरूको अत्यन्तै निजी पक्षको सिनेमामा हुने जीवन्त प्रस्तुतिले नेपालीहरूको नैतिकपनमा दुष्प्रभाव पार्ने ठानेका थिए जुद्धले । तर, जुद्ध आफैंले सन् १९४३ मा निजी सिनेमाभवन स्थापना गरेको बताइन्छ । उनको शासनकालमा आइपुग्दा राणाहरूले बर्सेनि १४–१५ वटा सिनेमा हेरेको उल्लेख पाइन्छ ।
जुद्धको निजी सिने
माघर बन्नुअघि सन् १९३७ को शिवरात्रि मेलामा विराटनगरमा ‘टंकी सिनेमाको खेल तमासा’ भएको र सो हेर्न ‘पहाड र मध्येस–तराईका धेरै आएका’ तत्कालीन समयको गोरखापत्रमा छापिएको छ (हेर्नुहोस् बक्स) । खास गरी सन् १९५० को दशकमा र पछि ‘टुरिङ सिनेमा’ या ‘टंकी सिनेमा’ नेपालका अलि साना–ठूला सहरमा पुगेपछि तत्‌तत् स्थानका सर्वसाधारणले पनि सिनेमा हेर्न पाएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
विद्यार्थीका लागि सिनेमा
सन् १९४५ मा पद्मशमशेरले शासनारूढ भएपछि आफ्ना दरबारमा विद्यार्थीका लागि केही सिनेमा देखाएका थिए । उनले विद्यार्थीलाई सिनेमा देखाउन थालेपछि सोबारे त्यसबेलाको एकमात्र खबरपत्रिका गोरखापत्रमा सम्पादकीय, लेख र चिठ्ठीपत्र छापिएका छन् । तीमध्ये पहिलो, दुई लाइनको सम्पादकीय थियो— ‘श्री ३ महाराज, आज नेपालका शिक्षित नवयुवकहरूका प्यारा श्री ३ महाराजबाट चलचित्रको भाव बुझ्नसम्म सक्ने कालेज स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई बराबर शिक्षाप्रद सिनेमा देखाउने प्रबन्ध मिलाइदिबक्स्यो । आज नेपालका प्रत्येक शिक्षित यो कुराले गदगद् छन् ।’
पद्मशमशेरको यो ‘उदारता’ बारे गोरखापत्रमा त्रिचन्द्रका एक विद्यार्थी रामराजको लामै लेख छापिएको छ । उनलाई विश्वास गर्ने हो भने त्यसताकाका विद्यार्थीको एउटा ठूलै हिस्सा (उनको दाबीअनुसार सयकडा पच्चीस) नेपालबाट सिनेमा हेर्न भारत पुग्थ्यो । यो आँकडाको सत्यतामा प्रश्न उठ्न सके पनि एउटा तथ्य के भन्न सकिन्छ भने पद्म शासनारूढ हुँदासम्ममा नेपालीहरू सिनेमा हेर्नैका लागि भनेर भारततर्फ हानिन्थे, अथवा ‘एक पन्थ दो काज’ गर्थे । पद्मको पालामा विद्यार्थीका लागि भनेर खासगरी धार्मिक सिनेमा देखाइएको र तीमध्ये पहिलो ‘विदुर’ भएको थाहा लाग्छ । पहिले त्रिचन्द्र कलेजका विद्यार्थीले मात्र सिनेमा हेर्ने मौका पाएकामा कम्तीमा एकपटक संस्कृत मेलतर्फका विद्यार्थीले पनि सिनेमा हेर्न पाएको देखिन्छ । र, सम्भवत: केही सर्वसाधारणसमेतले ती सिनेमा हेर्न पाएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । गोरखापत्रमा एक जना पाठकले लेखेका छन्, ‘वर्तमान श्री ३ महाराजबाट आफ्नो व्यक्तिगत उपयोगको निम्ति झिकाइएको सिनेमा अरू धेरै सर्वसाधारणलाई पनि हेर्ने मौका बक्सियो । फेरि यसपालि विशालनगर दरबारमा भैरहेको नाटकहरूलाई हेर्नका लागि कैयन दिनसम्म हदसे हद थाङ्ने माग्नेहरूका निम्ति पनि ढोका खुला थियो ! यसलाई भन्दछन् उदारता ! सायद कुनै–कुनैलाई यो कुरा मन परेन पनि होला— यसमा ता मुसुक्क हाँस्नु सिवाय के औषधि छ र ?’
पद्मशमेरले विद्यार्थीलाई सिनेमा देखाउन थाल्नुको कारणबारे अन्य कसैले टिप्पणी गरेको नसुनेकाले थप अध्ययन नगरेसम्म अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ । के उनी सिनेमामार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्थे ? अथवा आफ्नो उदारवादी छवि निर्माण गर्न चाहन्थे ? या उनको अभीष्ट अर्कै थियो ? ‘हूलका हूल’ नेपाली युवाहरू सिनेमा हेर्न भारत जाने भएकाले यसले एक त नेपालको पैसा बिदेसिने र अर्को, त्यहाँ ‘सबैखाले’ सिनेमा हेर्ने र ‘अरू नै केही’ (अलग विचारधारामा दीक्षित हुने या मतिभ्रष्ट हुने) समेत बोकेर आउन लागेकाले त्यसलाई रोक्न काठमाडौंमै ‘धार्मिक एवं शिक्षाप्रद’ सिनेमा देखाउन थालिएको हुन सक्छ ।
गोरखापत्रमै छापिएको लेखमा यसको केही छनक पाइन्छ, ‘हिन्दुस्थानको डुलफिरले २/४ ओटा असल कुरा सिकेता पनि एक दुइटा साह्रै नै बेकम्मा कुराहरू पनि सिकिन्थ्यो । त्यहाँका विभिन्न विचार धाराहरूमा बगेर अबोध छात्रहरूको यो लोक परलोक दुवै बिग्रन्थ्यो । शृंगार कलाले परिपूर्ण पश्चिमी चलचित्रले विलासिता र शृंगार सिकाउँथ्यो । विलासी चित्रले सनातानधर्मको आदर्श गाँठोलाई खुकुलो पाथ्र्यो ।’
पद्मशमशेरलाई निर्वासित हुन बाध्य तुल्याएर सत्तारूढ भएका मोहनशमशेरको पालामा नेपालमा सिनेमाको व्यावसायिक प्रदर्शन सुरु भयो । ‘काठमाडौं सिनेमाभवन’ को स्थापना गरेर व्यापारिक हिसाबले आजभोलिको जस्तो सिनेमाको टिकट बेचेर सिनेमा देखाउने प्रबन्ध भयो । त्यस्तै, विराटनगरमा समेत सिनेमाभवन स्थापना गर्ने प्रक्रिया राणाकालमै सुरु भएको थियो । ‘रामविवाह’ नामक सिनेमाबाट काठमाडौं सिनेमा भवनमा व्यापारिक प्रदर्शन प्रारम्भ भयो । तत्कालीन ‘म्युनिसिपलिटी’ अड्डाको मातहतमा रहेको सो सिनेमाभवन (पछि जनसेवा हल भनिएको) बाट हुने आम्दानी म्युनिसपलिटीको हुने व्यवस्था गरिएको थियो । श्रेणी हेरी ५० पैसादेखि पाँच रुपैयाँसम्म सिनेमाको टिकटदर तोकिएको थियो, जुन तुलनात्मक रूपमा अहिलेको भन्दा महँगो हो । तथापि, महँगै भए पनि कतिपय सिनेमा देखाउँदा त्यति बेलै टिकटको ‘कालोबजारी’ (तीन गुणासम्म) र झैझगडासमेत भएको पाइन्छ ।
काठमाडौं सिनेमाभवनको उद्घाटन हुँदै गर्दा गोरखापत्रले सोबारे सम्पादकीयसमेत छापेको थियो । सम्पादकीयमा उल्लिखित केही कुराले सिनेमा र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे तत्कालीन राज्यका चिन्ता–चासो प्रस्ट्याउँछन् । सम्पादकीयमा लेखिएको छ— ‘सिनेमाका धेरै गुणहरू छन् । तर ‍‘प्रयोग र उपयोग गर्न जानिएन भने त्यसबाट धेरै बेफायदा पनि हात पर्न जाने हुन्छ । यसबाट भइरहेका केही बेफायदाहरू यी हुन्— (१) सिनेमा हेर्नु पनि एउटा व्यसनजस्तो हुँदा बानी लागेपछि आफ्नो थैलो रित्तिँदै गएको पनि पर्वाह नराखी सिनेमा हेर्ने हुन्छन् । (२) धेरैजसो प्रचलित कलाकारको पात्रहरूको अभिनय र कहिलेकाहीँ अश्लील पात्रहरू पनि हेर्दा मानिसको कलिलो मनोवृत्ति दू:षित हुँदै जाने हुन्छ । (३) अशिक्षित जनतामा यसको प्रभाव नराम्रो पर्न गई दुष्कर्ममा उत्साह दिने पनि हुन सक्छ ।’
सिनेमाबाट हुने माथि उल्लिखित बेफाइदा पन्छाएर फाइदा उठाउन सक्नुपर्ने गोरखापत्रको आग्रह थियो । उसका अनुसारु ‘मनोरञ्जनका साथसाथै शिक्षाप्रद पनि हुने सिनेमाको खाँचो हामीलाई छ । मानसिक स्तर उकास्ने र देशको कल्याण गर्ने उत्साह भर्ने सिनेमाहरूकै प्रदर्शनले मात्र हामीलाई हित गर्छ । अश्लील तथा देशको मनोवृत्ति बिगार्ने सिनेमाहरूलाई हामीले ठाउँ दिन हुँदैन । सरोकारी विभागले यसमा विचार गर्ने नै छ । जुन महान् उद्देश्यबाट श्री ३ महाराजबाट यो सिनेमाको प्रदर्शन गर्न इजाजत बक्सेको हो त्यस्तै उद्देश्यमा हामी पनि चल्न सकौं ।’
मोहनशमशेरले जेसुकैले उद्देश्य लिएर व्यापारिक रूपमा सिनेमा प्रदर्शन गर्न दिए पनि प्रारम्भमा सो हलमा धार्मिक सिनेमा मात्र प्रदर्शन भए । तर, छिट्टै अन्य खाले अथवा हिन्दीका ‘प्यार–मोहब्बत’ वाला सिनेमा पनि देखाइए । त्यसबखतका गोरखापत्र हेर्ने हो भने त्यस्ता सिनेमाका हिरो–हिरोइन (के एल सैगल, सुरैया, रेहमान, मनोरमा, देवआनन्द आदि) का तस्बिर भएका पोस्टर–विज्ञापन नियमितै छापिएका देखिन्छन् । ती सिनेमा सम्पादकका दृष्टिमा ‘अश्लील’ या मानिसको ‘मनोवृत्ति बिगार्ने’ खाले थिए वा थिएनन्, त्योचाहिँ यसै भन्न सकिन्न ।
विराटनगर एक्सचेन्ज आफिस, चैत ८ गते । अस्ति फागुन २८ गते श्री शिवरात्रिको मेला हुनाले सो मेलामा यहाँका बडाहाकिम हाकिम कारिन्दाहरू र गाउँ मौजाका भलाद्मीहरू सबै गएका थिए । सो मेलामा टंकी सिनेमाको खेल तमासा पनि भएको थियो । सो खेल तमासा हेर्न पहाड र मध्येस तराईका धेरै आएका थिए ।
Previous नेपालमा सिनेमा Next